के छ भारतीय सांसदले बनाएकाे जलस्रोत प्रतिवेदनमा?
नेपाललाई छाडेर भारतीय संसदीय समितिले चीन, पाकिस्तान र भुटानसँगको जलाधार क्षेत्रका विषयमा विशेष प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
यसरी सुल्झाउन सकिन्छ सर्वोच्चको विवाद
अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्या प्रधानन्यायाधीशले गठबन्धन सरकारमा हिस्सा मागेका कारण मात्र होइन, संविधानले न्यायाधीशलाई स्वच्छन्द राखेका कारण उब्जिएको हो।
वर्गीयता सिर्जित लैङ्गिक उत्पीडनको दस्तावेज वर्गीय संस्कृति, वर्गीय उत्पीडन, पूँजीवादी अर्थ–संस्कृतिका आडमा विकसित उपभोक्तावादी संस्कृति, शरीर राजनीति जस्ता पक्षहरूको प्रायोगिक विश्लेषण ‘रुइबा’ को शक्ति हो।
नेवारको मात्रै हाेइन नेपाल संवत् नेपालमा मनाइने चाडपर्वलाई लिएर देखिएको विक्रम संवत् र नेपाल संवत् पक्षधरबीचको विवाद निरुपण हुनसकेको छैन।
जलवायु सङ्कट नियन्त्रणमा कति प्रभावकारी होला कोप-२६? जलवायु परिवर्तनमा कारक मानिएका ठूला देशहरूले आफ्नो कार्बन उत्सर्जन घटाउने थप महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तय गर्न र तिनको कार्यान्वयन गर्न सानो प्रतिबद्धता तथा प्रयासले पुग्दैन।
माओवादी किन चाहँदैन स्थानीय चुनाव? सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आउँदो चैतमा नगरी नहुने स्थानीय चुनावलाई पछाडि धकेल्ने गरी प्रतिनिधि सभा चुनावको रटान लगाउनुको भित्री कारण के हो?
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पुनरावलोकन जरुरी
कुनै पनि देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि न्यायपालिकाको संस्थागत विकास हुनुपर्छ। विशेषतः न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
सिनेमाको सम्भावना एकफेर आएको फौज फर्केला, तर एकफेर पसेको संस्कृति फर्किंदैन। यसको प्रभाव चिरकालीन हुन्छ।
किन आवश्यक छ पर्यावरण संरक्षणमा नारीवाद? महिलाले प्रकृतिलाई बुझ्छन्। प्रकृतिमा नयाँ जीव र वनस्पतिको जन्म, हुर्काइ र हेरचाहलाई नजिकबाट महसूस गर्न सक्छन्। त्यसैले पुरुष सिर्जित जलवायु परिवर्तन समस्याको समाधानका लागि पनि नारीवादी पर्यावरणको अवधारणा आवश्यक छ।
खैरो क्यानभासमा कोरिएका खस्रा जिन्दगानी स्नातकोत्तर तहको थेसिसका रूपमा दीपक तोलाङ्गेले निर्माण गरेको इथ्नोग्राफिक सिनेमा छारोले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ।